यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि लसुन खानुका फाइदाहरु, थाहा पाइराखौ Nepalpatra यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि लसुन खानुका फाइदाहरु, थाहा पाइराखौ
यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि लसुन खानुका फाइदाहरु, थाहा पाइराखौ
लसुन हाम्रो भान्सामा प्राय अनिवार्य भएको हुन्छ । लसुनको वैज्ञानिक नाम : अँलियम सटीवेम (Allium Sativem) भन्दछन् । लसुनबाट होम्योपैथीक कम्पनीले (Allium Sativem Q) नामको औषधि बजारमा ल्याएको छ ।
लसुनको बारेमा हालैमा केहि कुरा प्रकाशमा आएको छ । लसुनमा हुने एक प्रकारको सेक्स पावर बढाउने खालको गुणको कारणले गर्दा यो भान्सामा हुने गरेको रहस्य खुल्न आएको छ । लसुनको गन्ध महिलालाई धेरै प्रिय हुने कुरा बताईएको छ ।
लसुन मसलाको रूपमा प्रयोग हुदै आएको छ । लसुनमा औषधिको गुण हुने भएकाले यसको महत्व धेरै बढेको पाइन्छ । काँचो लसुनमा तिब्र गन्ध भएकाले लहसुलाई औषधिको रूपमा लिएको हुन सक्ने केहिको अनुमान छ । लसुनमा एंटीएजिंग गुण समेत भएकाले छालाको रोगमा पनि उपयोगी मानिएको छ ।
लसुनलाई पिसेर निकालेको रसलाई कालो दाग भएको ठाउमा लगाउने ५ मिनेटपछि पानीले धोएमा कालो दाग मेटिने हुन्छ । आउनुस् आज हामीले लसुन के कस्ता रोगमा सेवन गराउनाले फाइदा हुन सक्छ भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछौं । प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई प्रयोग गरेर लाभ लिन सिकौं ।
१. लसुनको प्रयोगबाट निको हुने रोगहरू
उच्च रक्तचापमा लसुनले राम्रो फाइदा गर्दछ । रक्तचापका रोगीलाई नित्य लसुन सेवन गर्ने सल्लाह दिनुपर्छ ।
२. कब्जियत र ग्यास्ट्रिकको रोगमा
लसुनलाई ठूलो औषधि मानिएको छ । नियमित लसुन खानेलाई यो रोग लाग्दैन ।
मुटु सम्वन्धी रोगमा लसुन ठूलो औषधि मानिएको छ । मुटु सम्वन्धित रोगीले नियमित लसुन सेवन गर्नुस् भन्ने हाम्रो राय छ ।
४. पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउन लनसुनको भूमिका ठूलो देखिन्छ । नियमित लसुन सेवन गर्नाले यो समस्या हल गर्दछ ।
५. चिसो, खोकी, दम आदि रोगमा समेत लसुन उपयोगी औषधि मानिन्छ ।
नोट : लसुनको सेवन गर्दा बढी गन्ध आउने हुनाले होम्योपैथीक कम्पनीले औषधि बनाएर बजारमा ल्याएको छ । आवस्यक मात्रामा विरामीले होम्योपैथीक डाक्टरको परामर्शमा लिन सक्नु हुनेछ ।